Haddii aad tahat muwaadin u dhashay dal Midowga Yurub ah islamarkaasna aad dooneyso in aad degnaato Finland wax ka badan saddex bilood, waa inaad ka diiwaangelisaa xaqa joogitaankaada. Codso diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub saddex bilood gudohood laga billaabo maalinta imaanshaha dalka.
Sidee ayaan u codsanayaa?
Diiwaangelinta maxaa loogu baahan yahay?
Ma lumin karaa xaqa joogitaanka?
Diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub ma ahan wax iskeed isaga timaada. Waxaad codsan kartaa diiwaangelinta xaqa joogitaanka haddii noloshaada Finland la damaanad-qaaday. Wuxuu ku salaysnaan karaa shaqo, waxbarasho, shaqo shirkadeed, xiriir qoys ama hanti kugu filan.
Haddii aad dooneyso in aad degnaato Finland wax ka badan saddex bilood, waa inaad ka diiwaangelisaa Hay’adda Socdaalka Finland (Maahanmuuttovirasto) xaqa joogitaankada. Codsiga waa in la xareeyaa saddex bilood gudohood laga billaabo maalinta imaanshaha dalka.
Diiwaangelinta ay sameyso Hay’adda socdaalku waa arrin ka duwan ka diiwaangelinta meesha aad deggan tahay nidaamka macluumaadka dadka ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto). Uma baahnid in aad joogitaanka ka diiwaangeliso Hay’adda Socdaalka haddii aad Finland si xiriir ah u joogeyso wax ka yar saddex bilood. Joogitaanka saddexda bilood waxaa laga soo tirinayaa markasta oo aad tagto meel ka baxsan xuduudaha Finland.
Faahfaahinta dheeraadka ah ee shuruudaha ka sii aqri bogga InfoFinlandi Muwaadiniinta Midowga Yurub .
Ka baaraandegista codsiga diiwaangelinta xaqa joogitaanku waa lacag. Lacagta waa in aad bixisaa marka aad codsiga xareynayso.
Ka codso diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub adeegga Enter Finland:
Buuxi foomka codsiga kuna dar lifaaqyada loo baahan yahay. Macluumadka ku saabsan lifaaqyada codsiga loogu baahan yahay waxaad ka heleysaa cutubka boggan ee Diiwaangelinta maxaa loogu baahan yahay?
Tag goobta adeegga ee Hay’adda socdaalka, sababtoo ah waa in aad caddeysaa qofka aad tahay islamarkaasna aad tustaa lifaaqyada asalka ah ee codsigaada. Horay u sii qaado kaar aqoonsi ama baasaboor shaqeynaya.
Waa in aad tagtaa goobta adeegga saddex bilood gudahood laga billaabo marka aad codsiga sameysay. Waxaa wanaagsan in horay ballan laga sameysto goobta adeegga. Ballan ka sameyso adigoo u maraayaa adeegga ballan-qabsashada elekteroonikada ee Hay’adda Socdaalka.
Xusuusnow in aad joogto u koontaroosho akownkaaga Enter Finland. Haddii caddeymo dheeraad ah looga baahan yahay codsigaada, waxaad warka laguugu soo dirayaa akownkaaga Enter Finland. Waxaad sidoo kale ka heleysaa ogeysiiska marka go’aanka la gaaro.
Haddii aadan awoodin ama aqoonin in aad shabakadda ka sameyso diiwaangelinta:
Ku samee codsi warqad ah codsiga diiwaangelinta, waxaad xittaa ku sameyn kartaa goobta adeegga ee Hay’adda socdaalka. Codsiga ku samey saddex bilood gudahood laga billaabo maalinta imaanshaha dalka.
Foomka diiwaangelinta ka daabaco bogagga shabakadda Hay’adda Socdaalka kaddibna buuxi. Codsiga waa in si taxadar ah loo buuxiyaa. Codsi si qaldan loo buuxiyay lama qabanayo.
Ballan ka sameyso adigoo u maraayaa adeegga ballan-qabsashada elekteroonikada ee Hay’adda Socdaalka. Waxaa wanaagsan in horay ballan looga sii qabsado goobta adeegga.
Sii qaado foomka diiwaangelinta oo aad buuxisay, kaar aqoonsi ama baasaboor shaqeynaya iyo lifaaqyda loo baahan yahay. Macluumadka ku saabsan lifaaqyada codsiga loogu baahan yahay waxaad ka heleysaa cutubka boggan ee Diiwaangelinta maxaa loogu baahan yahay?
Haddii aad buuxiso shuruudaha iyo sababaha joogitaankaada Finland, waxaad Hay’adda socdaalka ka heli kartaa shahaadada diiwaangelinta ee xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.
Marka aad si sharci ah islamarkaasna xiriir ah ku deganeyd Finland shan sano, waxaad xaq u leedahay ogolaanshaha joogitaanka joogtada ah ee Finland. Xaqa joogitaanka joogtada ah ee muwaadinka Midowga Yurub waa in si gaar ah looga codsadaa Hay’adda socdaalka.
Diiwaan-gelinta xaq u lahaanshaha joogista ee muwaadiniinta Waqooyiga YurubLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEnterfinland.fi
Dalabka internetkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Sharciga joogtada ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Aqoonsiga shakhsiyeed ee Finnishka (Suomalainen henkilötunnus)
Haddii Hay’adda socdaalku ay diiwaangeliso xuquuqdaa joogitaanka, macluumaadkaada shakhsiyeed waxaa si otomaatig ah loogu diiwaangelinayaa nidaanmka macluumaadka dadka. Waxaad islamarkaas heleysaa aqoonsiga shakhsiyeed ee Finnishka.
Aqoonsiga shakhsiyeed waxaad sidoo kale ka heli kartaaHay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ama xafiiska canshuurta.
Haddii aad Finland waqti sanad ama wax ka badan ah u soo guurto waa inaad tagtaa iyo iska diiwaangeliso Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene .
Bogga InfoFinland ee Liiska xusuusta ee u soo guurista Finland waxaad ka heleysaa macluumaadyo faa’iido leh oo ku saabsan waxyaabaha kale ee ay tahay in aad qabato marka aad u soo guureyso Finland.
Xaqaada joogitaan waa la diiwaangelin karaa, haddii aad Finland ku heysato shaqo ama shirkad.
Waxaad u baahan tahay dukumentiyadan soo socda:
foomka diiwaangelinta ee Midowga Yurub
kaar aqoonsi ama baasaboor shaqeynaya
heshiiska shaqada (haddii aad heysato shaqo)
caddeynta shaqada shirkadda (haddii aad ganacsade tahay)
Xaqaada joogitaan waa la diiwaangelin karaa, haddii aad wax ka barato machad laga aqoonsan yahay Finland.
caddeynta joogitaanka (caddeynta, in aad tahay arday wax ka barta machad laga aqoonsan yahay Finland)
aad heysato ammaanka ceymiska jirada (tusaale, kaarka bukaanka ee yurubiyaanka)
caddeynta dhaqaalahaada nololeed ee Finland
Xubin qoys ee qof deggan Finland
Xaqaada joogitaan waa la diiwaangelin karaa, haddii aad leedahay xubin qoyskaada ka tirsan uu si rasmi ah u deggan Finland.
foomka diiwaangelinta Midowga Yurub
kaar aqoonsi ama baasaboor oo shaqeynaya
shahaadada guurka ama xiriirka lamaane diiwaangashan
caddeynta labo sano oo wada-degaanasho ah ama cunugga aad mas’uul ka wada tihiin, haddii aad ku jirto wada-noolaasho
shaahadada dhalashada cunugga, haddii aad leedahay cunug aad mas’uul ka tahay
caddeynta sababta uu Finland ku joogo isu-keenaha qoysku
Kaarka joogitaanka ee xubinta qoys ee muwaadinka Midowga Yurub
Haddii aadan aheyn muwaadin Midowga Yurub ah, laakiin xubin qoyskaada ka tirsan ee Finland deggan uu yahay muwaadin Midowga Yurub waa in aad codsataa kaadhka joogitaanka ee xubinta qoyska muwaadinta Midowga Yurub.
Waxaad kaadhkka joogitaanka si elekteroonikada ka codsan kartaa adeegga Enter Finland ama goobta Hay’adda Socdaalka Finland (Maahanmuuttovirasto). Ka baaraandegista codsiga joogitaanku waa lacag. Lacagta waa in aad bixisaa marka aad codsiga xareynayso
codsiga kaarka joogitaanka
shahaadada guurka ama xiriirka lamaanaha ee diiwaangashan
caddeynta diiwaangelinta muwaadinka Midowga Yurub ee aad Finland la timid
caddeynta xiriirka qaraabo (carruurta muwaadinka Midowga Yurub ama ehelka kale ee aad mas’uulka ka tahay)
caddeynta wada-deganaashaha (haddii aad muwaadin Midowga Yurub u tahay lamaane xiriir furan islamarkaasna aysan jirin carruur aad mas’uul ka wada tihiin)
Kaarka joogitaanka ee xubinta qoyska muwaadinka Midowga Yurub waxaa la bixiyaa shan sano ama waqti ka yar, haddii deganaashaha Finland ay qaadaneyso wax ka yar shan sano.
Kaarka sharciga ee xubnaha qoyska muwaadinka EU gaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Hanti ku filan
Haddii xaqaada joogitaanka aan lagu diiwaangelin karin sababaha kor lagu xusay mid ka mid ah, waad codsan kartaa diiwaangelinta haddii aad heysato hanti kuugu filan ku noolaashaha Finland. Hanti kugu filan xittaa waa sabab.
caddeynta in aad heysato hanti kuugu filan ku noolaanshaha Finland.
Diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub ama kaarka joogitaanka xubinta qoyska muwaadinka Midowga Yurub waa lala noqon karaa ama waa buri kartaa haddii:
aad Finland ka guurto
aad si xiriir ah dibadda u joogtay labo sano
aad bixisay macluumaadyo khalad ah marki aad codsaneysay diiwaangelinta ama kaarka joogitaanka xubinta qoyska muwaadinka Midowga Yurub
aad qarisay arrin celin kartay sameynta diiwaangelinta ama bixinta kaarka joogitaanka
Finland lagaa masaafurinayo
aad heleyso dhalashada Finland
Kudaro xisaabta in xaaladdaada nololeed haddii ay isbeddesho ay saameyn ku yeelan karto xaqaada joogitaanka. Haddii diiwaangelinta xaqaada joogitaanku ay ku saleysneyd shaqo, shirkad shaqeyneysa, boos waxbarasho, xiriir qoys ama lacag kugu filan islamarkaasna aysan sababtaa hadda jirin, diwaangelinta waa la ceshan karaa.
Ha’adda socdaalka ayaa go’aamisa kala laabashada xaqa joogitaanka ama buritaankeeda.
Haddii aadan dooneyn in lagaala laabto xaqaada joogitaanka ama kaarkaada joogitaanka, Hay’adda socdaalka ayaad arrintaas ka codsan kartaa ugu dambeyn labo sano gudohood marka aad dibadd au guurto.
Kala noqoshada xaquuqda sharciga degenaanshahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa